बुबाको पदचाप पछ्याउँदै डा.कपिल रिजाल : पेशाले चिकित्सक, फिल्म निर्देशनमा पनि सक्रिय - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । विदेशमा बसे पनि फिल्म निर्माण र निर्देशन गर्ने नेपाली थुप्रै छन्। तीमध्येका एक हुन् डा.कपिल रिजाल। रिजाल पेशाले दन्त चिकित्सक हुन्। तर फिल्म निर्देशनमा पनि उनी सक्रिय छन्। त्यो पनि अंग्रेजी फिल्म। साँढे दुइ दशकदेखि युकेको लण्डनमा बस्दै आएका डा. कपिल रिजालले चिकित्सा क्षेत्रबाट बचेको समयको सदुपयोग गर्दै छोटा फिल्म तयार पारेर आप्mनो पिताको पथ पछ्याएका छन्।